Ukubheja Izibikezelo generator 2014
Thola ukubheja omthanda kakhulu manje futhi asebenzise yethu ithuluzi isazi ulwazi “Ukubheja ugesi” ukuletha ekhaya le win ne yezemidlalo bett ...
Isigaba Download Imidlalo
Posted in Isofthiwe	2017-10-15
abadlala Siyakwamukela, lokhu jikelele ukhiye umdlalo generator iyithuluzi ukuthi unamandla ukukhiqiza khulula umdlalo ikhodi cishe njalo umdlalo ividiyo. Awudingi manje ukulanda ezinye imifantu noma nezimagqabhagqabha kusuka kumasayithi okungewona e-eqinisekisiwe, lwanele ukuba leli thuluzi owesabekayo futhi ungakwazi ngiyothatha ukhiye mahhala negeyimu eyintandokazi yakho yevidiyo e yesibili.
Kungenzeka kanjani ukuba uthole khulula umdlalo ukhiye?
Ngenxa ozakwethu kanye database equkethe mayelana 500.000 ezahlukene futhi ubuningi umdlalo amakhodi siyakwazi amandla wonke umdlali ukuze uthole ikhodi umdlalo imahhala. Sithole asebenzisana ne-CD ukhiye ukuqhathanisa intengo amawebhusayithi kanye ezinye inthanethi umdlalo ezitolo ukhiye. Thina ngokuphelele wenza le generator lokukwazi ukhiye ukusiza abadlali emhlabeni wonke ...
Posted in Game Izibuyekezo	2017-02-26
An FPS ezivezwa developer Polish Farm 51, ngokuyinhloko wayeqonda ngoba Franchise NecrovisioN kanye ukufakwa yakamuva the Painkiller ochungechungeni. Lo mdlalo video wazisa indaba umfana ogama yomsebenzi obangela kuhilela yokuxhuma up emikhawulweni okuxekethile ohulumeni federal abantu abayizikhulu. lwesigameko abaholayo womlingiswa kwenza eziyinkimbinkimbi lapho ezisulwini zakhe abangahle enquma empini emuva. Indaba ikhona kusukela imibono angamawele we 2 ezilingana izinhlamvu.
Thola Ngisho PC /-Windows scary FPS Bhalobhasha, Ukuhlanganisa imiphumela izindaba ezimbili exhumene ngentuthuko entsha computer innovation. Lo mdlalo yasungulwa ngo-studio Polish Farm 51, okuqondwayo action adventure video game Deadfall Adventures, Bhalobhasha NecroVision kanye ukufakwa sokugcina ochungechungeni Painkiller ...
Posted in Game Izibuyekezo	2017-02-24
Uma kukhona into uyinqaba endaweni yakini abangalukhulumi uya ukubiza? No, hhayi Ghostbusters, Nokho lokho close. Ekuphileni kwangempela wena 'd cishe shayela 911, ayivumanga wena? Sibonga u 911 Operator kusuka Polish indie studio Jutsu Imidlalo ungathola ncamashi ukuthi luhlobo luni izithiyo lezi izinsikazi abanesibindi futhi amadoda babhekane nazo nsuku zonke. 911 Operator eqinisweni uye wenza abantu manje got a date ukukhululwa futhi kungcono kule nyanga– February 24, 2017.
911 Operator ngumdlalo, a isu simulator zokuhlola ezasungulwa studio Polish Jutsu Imidlalo, okuyinto a reiteration iphrojekthi lapho won izimbangi Indie Umbukiso egujwa Digital Dragons 2016. In 911 Operator, wena bagcina a opharetha wokutakula, futhi umsebenzi wakho iwukuba aphendule izingcingo ezivela kubantu izingozi ...
Posted in Game Izibuyekezo	2017-02-23
I 4th ​​ingxenye athandwa kakhulu action RPG video game ewuchungechunge esimweni isikhala-opera. BioWare Montreal, studio ekuqhubekiseleni ukuthi wasiza ukuthuthukisa ukufaka ezimbili eyedlule wathatha izintambo of Mass Effect: ukuthuthukiswa Andromeda sika. Indaba Umdlalo wevidiyo ayihlobene trilogy ngempi Commander Shepard sika Versus kwabavunayo, enikeza kunalokho itulo ehlukile ngokuphelele featuring izinhlamvu ezintsha kanye nezindawo.
Mass Effect: Andromeda for PC / Windows kungenye ukufakwa action-RPG waqala eminyakeni eminingana emuva BioWare. Abakhi kwatholwa uMnyango Montreal okuyinto babesizile ukuthuthukiswa Mass Effect 2 futhi Mass Effect 3.